FARITRA ANALAMANGA : Eny amin’ny fokontany no hiainga ny ady amin’ny pesta. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE FARITRA ANALAMANGA : Eny amin’ny fokontany no hiainga ny ady amin’ny pesta.
By Nirinaoct 02, 2017, 19:57 0
Nandray ny andraikiny ny faritra Analamanga hiadiana amin’ny valan’aretina pesta. Nisy ny fivoriana maika nataon’izy ireo androany 02 Oktobra 2017. Nitsangana noho izany ny « cellule de crise » izay tarihan’ny prefekitioran’ Antananarivo, ny faritra Analamanga ary ny tale-paritry ao amin’ny minisiteran’ny fahasalamana. Misy efatra ireo kaomisiona mandrafitra izany « cellule de crise » izany, ny fifandraisana, « surveillance épidémiologique », fanoherana ary ny « logistique ».
Didina ny fokontany.
Hivoaka anio hariva ny fanapahana rejionaly mandidy ny tsy maintsy anaovan’ny fokontany fanadiovana. Hisy ihany koa ny fanapahana maniraka ny lehiben’ny fokontany sy ny lehiben’ny andrimasom-pokonolona hampiakatra ny vaovao rehetra momban’ny tsy fahasalamana ary indrindra ny fahafatesana, hoy ny lehiben’ny faritra Analamanga, Ndrantonomena RAKOTONANAHARY. Ho arahi-maso ireo vahiny mivezivezy eny amin’ireo fokontany.
Arahi-maso ny toeram-piantsonana.
Ankoatra izany, hisy ny fitiliana ny aretina pesta eny amin’ireo toeram-piantsonana efatra, Ambodivona, Ampasampito, fasan’ny karana Ankadimbahoaka ary ny eny Antohamadinika. Atao izany mba afahana manaraka ny fahasalaman’ny tonga avy any amin’ny faritra.
Nomarihany fa maimaimpoana ny fitsaboana ny aretina pesta eny amin’ny CSB II sy ny eny amin’ny toeram-pitsaboana miankina amin’ny fanjakana rehetra manerana ny nosy.
Manentana ny olom-pirenena rehetra ity lehiben’ny faritra Analamanga ity ny tsy anafenan’ny aretina raha misy ny tsy fahasalamana.
Previous PostOMACI: Hitsangana eto Madagasikara ny tranom-pamokarana sarimihetsika ana vahiny. Next PostCENI: Hanao fanamarinana ny lisitry ny mpifidy.